Ahoana ny fomba ahafahana mamela ny antontan-taratasy ao amin'ny macOS Mojave | Avy amin'ny mac aho
Hatramin'ny alatsinainy lasa teo, ny kinova macOS vaovao ho an'ny solosaina Mac, izay efa nivoaka tamin'ny tsena nanomboka ny taona 2012, dia azo ampiasaina amin'ny anarana hoe Mojave. Ao amin'ny Mac avy any Mac aho dia nanao fampianarana isan-karazany izahay hampisehoana inona ireo lahasa lehibe inona no atolotray anay amin'ity kinova vaovao ity sy ny fomba fiasan'izy ireo.
Tsy misy isalasalana, ny iray amin'ireo nahasarika ny saina indrindra nandritra ny WWDC 2018 nanehoana ny macOS Mojave dia ny maody maizina, a maody maizina izay tena mora ampiasaina araka izay asehonay anao amin'ity lahatsoratra ity. Zava-baovao iray hafa, indrindra ho an'ny tsy milamina indrindra ao amin'ny fiasa asiana rakitra na stacks amin'ny teny anglisy.
Mikarakara ho azy ity asa ity apetaho amin'ny birao ireo rakitra rehetra miankina amin'ny karazana fisie izany. Amin'izany fomba izany, amin'ny alàlan'ny fampandehanana ity asa ity, izay tsy mandeha ara-dalàna, dia afaka manadio haingana ny birao misy antsika isika amin'ny alàlan'ny fanangonana ireo rakitra rehetra ao anaty antontany.
Al tsindrio isaky ny antontan-taratasy, aseho avokoa ireo izay apetaka mba hahafahantsika mifandray amin'izy ireo toy ny hoe tsy voaangona. Raha te hampandeha ity asa ity ianao dia hasehoko anao ny fomba fanaovana azy.
Raha efa manana rakitra be dia be eo amin'ny biraontsika isika dia mila mandeha amin'ny toerana banga amin'ny birao fotsiny isika, kitiho ny bokotra havanana, na kitiho amin'ny rantsantanana roa raha mampiasa ny trackpad isika ary manery ny safidy Mampiasà batery.
Amin'izay fotoana izay dia ho hitantsika ny fomba ny antontan-taratasy rehetra dia hatambatra ho antontany, miankina amin'ny karazana fisie misy azy ireo. Raha ny amiko, araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony, ny macOS dia nanangona ireo rakitra ho antontan-taratasy, sary, pikantsary ary maro hafa. Ireo stack dia noforonina mitsangana ary tsy azontsika atao ny mamindra azy eo amin'ny birao, asa iray azon'i Apple ampiana amin'ny fanavaozana amin'ny ho avy.
Raha tadiavintsika ny rakitra rehetra miverina amin'ny toerany voalohanyMila manao ny dingana mifamadika fotsiny isika ary manafoana ny safidin'ny batterie Use. Amin'izay fotoana izay dia hiverina amin'ny toerana nisy azy avy ny rakitra rehetra
1 Ahoana ny fomba hametrahana vondrona
2 Ahoana ny fomba hamafana ireo antontan-taratasy
3 Ny Mac-ko tsy mifanaraka amin'ny macOS Mojave fa te hampiasa antontan-taratasy aho
4 Ahoana ny fanatsarana ny macOS Mojave amin'ny rangotra
Ahoana ny fomba hametrahana vondrona
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, ny iray amin'ireo lahasa tokony ampidirin'ny macOS amin'ny fanavaozana ny ho avy dia ny mety afindra manodidina ny birao ireo batery noforoninay, satria eo amin'ny sisiny ankavanan'ny efijery ihany izy ireo no miorina amin'ny toerana mitsangana, zavatra izay mety tsy mety indrindra amin'ny mpampiasa maro ary aleon'izy ireo mametraka azy ireo eo an-tampon'ny efijery.
Na dia marina aza izany, ny batterie options tsy misy fanahafana fanampiny, macOS dia manome andian-dahatsoratra misy ho antsika hahafahanay manasokajy ny atiny aseho ao amin'izy ireo. Raha vantany vao ampidirina anaty macOS ny bateria dia manindry indray isika amin'ny bokotra havanana na amin'ny rantsantanana roa raha mampiasa ilay làlana hidirana amin'ny menio izay ampandehananay azy indray.
Eo amin'ny farany ambany dia misy safidy vaovao antsoina hoe Group Stacks By. Ireo safidy ampiasain'i macOS ho antsika mandamina stack miaraka:
Daty fanokafana farany
Rehefa tsindrio, ohatra, ny Last Open Date, ny macOS dia hampiseho ireo stacks voalamina araka ny volana na andro nanokafana azy ireo tamin'ny fotoana farany. Amin'izany fomba izany dia mora kokoa ny miditra amin'ireo antontan-taratasy farany noforoninay sy nampiantrano anay teo amin'ny birao macOS anay.
Raha mampiasa ny marika isika, dia ny batterie haseho arak'ireo marika izay nanasokajianay ireo rakitra, mba hahafahantsika miditra haingana kokoa amin'ireo rakitra arakaraka ny fanasokajiana na ny fanononantsika.
Ahoana ny fomba hamafana ireo antontan-taratasy
Satria manolotra safidy iray i Apple hanangonana ireo karazan-drakitra samihafa izay hitantsika teo amin'ny birao mamela antsika hiaraka mamafa azy ireo, safidy iray ankasitrahana, indrindra raha nanapa-kevitra ny hametraka baiko amin'ny latabatra izahay.
Mba hamafana ireo antontan-taratasy izay noforonin'i macOS rehefa nampandeha ity asa ity dia mila fotsiny isika afindra amin'ny fitoeram-bokatra ny rakitra. Rehefa manandrana mamerina ny fisie avy amin'ny fako, raha izany no izy, dia tsy ho atambatra miaraka izy ireo, ka tsy maintsy mandeha tsirairay isika manamarina hoe iza no tianay haverina na averintsika amin'ny birao daholo ary jereo ny bateria izay namorona ity safidy ity, raha mbola ampiasaintsika amin'ny solosaintsika io.
Ny Mac-ko tsy mifanaraka amin'ny macOS Mojave fa te hampiasa antontan-taratasy aho
Araka ny efa nolazaiko teo am-piandohan'ity lahatsoratra ity, Apple dia nandao ny fanavaozana ny fitaovana rehetra talohan'ny 2011 (tafiditra), no hany maodely mifanentana amin'ireo natomboky ny orinasa tamin'ny 2012. Raha te hankafy an'io asa io ianao, saingy manana Mac tsy raisina amina fitaovana tsy mifanentana dia namoaka lahatsoratra ny mpiara-miasa amiko Jordi, andro vitsivitsy lasa izay izay anehoanay ahoana no hametrahantsika azy hanararaotra ireo fiasa vaovao.
Raha tsy manam-potoana na faniriana hanasarotana kely ny fiainanao ianao hahafahanao manararaotra ireo fiasa vaovao atolotry ny macOS Mojave amintsika dia tokony hanana faharetana kely ianao, satria azo antoka ny mpamorona sasany dia mandefa fampiharana mamela anao hampiasa io asa io ary mety hanampy fiasa fanamboarana vaovao izay tsy misy amin'ny fomba natoraly izy io.
Ahoana ny fanatsarana ny macOS Mojave amin'ny rangotra
Eny, mbola izany ihany tsy nanapa-kevitra ny hametraka ny kinova macOS farany ianao azo alaina ho an'ny Mac mifanentana, namorona tutorial tsara dia tsara indray ny mpiara-miasa amiko, Jordi, izay ampisehoanay anao ny dingana rehetra harahina manaova fametahana macOS Mojave madio tanteraka.
Misaotra ny iCloud, mora dia mora ny manao backup amin'ny fisie rehetra. Ary koa, foana fametrahana madio madio no atoro anao amin'ireo kinova vaovao isaky ny rafitra fiasa, tsy ijerena raha solosaina na fitaovana finday no resahina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Mojave » Ahoana ny fomba ahafahana mamela ny antontan-taratasy ao amin'ny macOS Mojave
Aquavias, lalao fialamboly izay tsy maintsy hialantsika amin'ny haintany amin'ny alàlan'ny fananganana lakandrano
Mojave Compatible VMware Fusion 11 tonga ary fanatsarana fitaovana